शनिबार, २८ असार
भानुभक्त प्रतिगामी कि हामी ? २८ असार २०७६
फरक स्मृतिमा भानु २८ असार २०७६
उपेक्षामा भानु र भानु जन्मस्थल पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना बोकेको भानु जन्मघर आगलागीका कारण ध्वस्त भएको थियो । तर, यो घरको संरक्षणमा अझैसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन । २८ असार २०७६
क्रान्तिकारी भानुभक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रपतिको शपथ लिँदा बाइबलको उच्चारण मिलेन भनेर भोलिपल्ट फेरि शपथ लिनुपरेको थियो । आजको युगमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई त यस्तो गरिन्छ भने आजभन्दा २ सय वर्षअघि भानुभक्तको पालामा सामाजिक संरचना कस्तो थियो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । २८ असार २०७६
भानु जन्मस्थल पुगेर फर्केपछि ! युद्धले क्षतविक्षत भएको खण्डहरूजस्तो देखिन्छ भानु जन्मस्थल । किन ध्यान नपुगको होला ? कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको मात्र दोष नहोला तर सच्याउनैपर्ने गल्ती त हो नै यो । अब काम कहाँबाट सुरु गर्ने ? कसले गर्ने ? कहिले गर्ने ? किन नगरेको ? प्रश्नहरू असारे पानीअमलाझैं झ्याँगिन्छ । २८ असार २०७६
तीन छोटा कविता २८ असार २०७६
मनको गहिराइ २८ असार २०७६
गाँजा र बब मार्लीले थिचिएका गंगा वरदान फुलेको दाह्री । लट्टा परेको कपाल । चाउरिएका गाला । चिम्सा आँखा । पातलो ज्यान । झट्टा हेर्दा ठ्याक्कै बब मार्ली (विश्वचर्चित जमैकन गायक) । यही नै गंगा बर्दानको देखिने व्यक्तित्व । . २८ असार २०७६
भानुभक्त देवता होइनन् हामी अलिअलि राम्रो पाएपछि औधी राम्रो भन्छौं । मानौं, त्योभन्दा राम्रो अरू केही छैन । अनि, अलिअलि नराम्रो पाएपछि ज्यादै नराम्रो भन्छौं । हामी धेरै अघिदेखि यस्तै प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छौं । २८ असार २०७६
अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी २८ असार २०७६
अमरावती कान्तिपुरी नगरी साँझ परिसकेकाले त्यहाँ धेरैबेर बस्ता आफ्नो कविता अश्लील दोष पर्ला भन्ने ठानी उनी जुरुक्क उठेर उद्यानबाहिर निस्के । साझा यातायातको हरियो बस पनि ठ्याक्क त्यहीँ रोकिइरहेको रहेछ । सबै पसेको देखी उनी पनि पसे त्यसैमा । पस्न त पसे, तर बस्न भने घुइँचोले दिएन । ‘कान्तिपुरीमा मान्छे निकै बढेछन् ए ! यतिका मान्छे खान्छन् पो के ?’ उनको दिमागमा अर्को प्रश्न रिङ्न आयो । २८ असार २०७६
भानुभक्तप्रतिको भान लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजस्ता साहित्यकारले पनि भानुभक्तलाई आदिकवि भन्न नहुने तर्क गर्न सकेनन् । अर्थात्, भानुभक्तलाई उनीहरुले कम आँकेनन् । . २८ असार २०७६
केकी अधिकारीकाे प्रश्नः छवि जाेगाउन शिल्पा राेइदिनु पर्ने ? उनी रोइन्, किनकि उनीसँग भान्सा कोठा छ। मुख धुन पानी छ। आँसु पुछ्न टालो छ। उनी रोइन्, किनकि उहाँ साथ दिने साथी होइन, कमजोरी केलाउने काजी होइबक्सँदोरहेछ, दण्ड दिने हुकुम होइबक्सँदोरहेछ। २८ असार २०७६